Fanamarinana CCNA - Guide tanteraka
11 Mey 2017
Mila ny ora ao amin'ny "Indostrian'ny tambajotra" - CISCO
Ny indostria IT dia anisan'ny ahitana ny karazany indrindra amin'ny indostria noho ny hafanam-pony amin'ny fiantsoana, ny fanonerana, ny fiheverana ary ny mpanohitra. Ny filàna ny toe-javatra iainana amin'ny fijanonana, ny fampivoarana ary ny fampitomboana ny orinasa IT dia nahatonga ny hevitra hoe "Networking" sy ny fivoarana haingana, ary ny fivoaran'ny "Networking" dia namoaka "manam-pahaizana" momba ity sehatra ity. Miaraka amin'ny tombontsoa goavana ho an'ireo manam-pahaizana sy ny fitrandrahana tsotra izao sy ny fahatakarana tsotra izao, ny fahalianan'ny "Prepared Professionals" dia efa novolavolaina. Androany, na dia ny fahazoana "Professional Professionals" aza dia tsy mahagaga loatra izany, ary ny fiheverana ny tena zava-dehibe dia niova tamin'ny "Professionn'ny antoka" izay nohamafisina tamin'ny alàlan'ny fitaovana an-tserasera, fomba fiasa ary ny asa. Ny fiekena ireo "Professional rahateo" ireo dia noho ny fomba niomanany na nanamafisana azy ireo tamin'ny fandrosoana, ny hevitra ary ny fandaharan'asan'ny tambajotra mifandraika amin'ny varotra. Ireo mpankasitraka lalina ireo "Professional Professionals" ireo no nanamafy ny "CISCO" .. !!
Fa maninona ny "Certificat" CISCO no "tena"?
Tantara an'ny CISCO
CCNA Certification na CCNA Training
Aiza no tokony hohamafisina?
CISCO dia tompon'antoka amin'ny "Indostrian'ny tambajotra" ary amin'ny tsy fetezana azonao lazaina na omen'ny mpitondra anao mazava tsara fa lasa "Lehilahy Mpanjaka" ianao. Ny zava-drehetra dia heverina fa antony iray ihany ny marina fa ny CISCO dia manome toky ny manam-pahaizana fa manana fahazoana tsara kokoa ny tambajotra web, zavatra, tambajotra isan-karazany mifamatotra amin'ny tontolo iray ary ny fomba izay, ny ankamaroan'ny zavatra ao amin'ny indostrian'ny tambajotra, ny rafitra biolojika maneran-tany ankehitriny, dia avy amin'ny CISCO. Androany dia CISCO no mahavariana, mahaleo tena, mpisava lalana manontolo ao amin'ny orinasan-tambajotra. Izy io dia manome valiny ho an'ny mpanjifa gadget ao amin'ny tambajotra isan-karazany mba hahafahany mifandray amin'ny hafa, manome fahafahana miditra sy fifanakalozana data amin'ny olona tsotra, na inona na inona karazana amin'ny fotoana, toerana ary dingana. Ny CISCO dia manolotra tolo-kevitry ny tambajotram-pifandraisana faran'ny endriny, ahafahana manangana rafitra iray mahazatra mba hanomezana ny fitantanana ny tambajotra azo antoka. Manome karazana fitaovana maro samihafa mihitsy aza izy io mba hanohanana ny Cisco Internetwork Operating System Software. Izany no antony mahatonga ny firoboroboana sy ny fikambanana mandefa ny tombotsoan'ny manam-pahaizana iray izay nanamafy ny CISCO, izany hoe ny "Certification CCNA" dia mahay. Ny fampiofanana "Cisco Certified Network Associate" dia ny valinteny omen'ny andro androany ny fanolorana ny fiantsoana tambajotra.
Tena manitikitika ny famotopotorana ny fomba sy ny fotoana nahatonga ny CISCO ho lasa goavana tahaka izany eo amin'ny sehatry ny tambajotra. Mandeha ny lalana hiverina ao amin'ny 1980 raha i Len Bosack sy Sandy Bosack, izay samy miasa ao amin'ny birao PC PC ao amin'ny Stanford University dia nanao serivera iray izay ahafahan'ireo PC ireo mifampiresaka amin'ny fampiasana ny fivoriambe iraisana. Tao amin'ny 1984 dia nanangana "cisco Systems" izy ireo ary taorian'izay tao 1992 dia niova ho "CISCO Systems, Inc." ny anarana. Tamin'izany fotoana izany dia nanao "Serveurs de la portal" izy ireo izay antsoina hoe "Pasta Alimentaire" tahaka ny AGS; MGS; CGS; IGS sy ny AGS +. Tao anatin'ny herintaona dia nampitain'i XISUMX, 4000, 7000, 2000, ary 3000 ny fitaovana fandrakofam-peo. Tsy ela dia lasa CISCO ny fikambanana manokana sy mpikaroka manokana ao amin'ny orinasan-tserasera. Izany dia nitarika karazana fitsapana hafa ho azy ireo, izay fomba iray hanaraha-maso azy ireo amin'ny sehatra sy faritra samihafa. Ny fananana fitaovana sy rafitra matotra dia nitaky asa be karama mba hampidirana, hanara-maso sy hanadihady azy ireo. Ny valinteny mety amin'izany dia ny fandaharam-potoana - Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) programa. Ny tanjona dia tena fototra - betsaka ny fitaovana entina entina entina manam-pahaizana manokana izay afaka manao toy izany na dia eo aza ny fanaraha-maso sy ny fanadihadiana rehefa ilaina izany. Ny programa dia nanomana manam-pahaizana izay afaka mandray ireo rehetra ireo ary manatanteraka araka izay takiana. Ny fandaharan'asa dia nahasarika olona tsirairay avy amin'ny sehatra maro samihafa, ny fanaraha-maso ny drafitra sy ny fanamafisana ny tambajotra, ka nanokatra lalana ho an'ny rehetra, izay voafetra ho an'ny mpivady iray. Ny "fanamarinana CCNA" no dingana voalohany na mety hiantso azy io hoe "vato misintona" amin'ity fandaharana ity.
Ny CCNA Certification dia ny mari-pankasitrahana tsy maintsy ilaina ho an'ny mpizaha traikefa izay tokony hohamafisin'ny CISCO. Ny mari-pamantarana hafa rehetra dia maka ity mari-pankasitrahana fototra ity. Ny tombotsoan'ny CCNA Certified / Certification dia maro, ny lisitra ny mpivady -
Ny fikambanana dia mahazo fandaminana ny fahaizana mandanjalanja ny fahaiza-manaon'ny manam-pahaizana iray izay afaka miatrika ilay sambo araka ny tokony ho izy ao anatin'ny fiarahamonina biolojika mifantoka. Azon'izy ireo atao izany ho fitsipika mifidy mpifaninana iray.
Ny olona dia nomena fahaiza-manaony mba hahatakarana, hampidirana sy hifampiraharaha amin'ny Cisco Internetwork Operating System sy Cisco fitaovana. Ankoatr'izay dia ny torolalana sy ny bolongan'ny aterineto dia ampianarina amin'ny tanjona fa mety hivezivezy any amin'ny tontolo izay "Non-Cisco".
Ny fampiofanana CCNA dia hanome anao dingana iray izay hiverenan'ny CCNA mari-pahaizana ho sehatra iray ho an'ny asa mahafa-po sy manaja.
Ny CCNA Fanamarinana anao dia hanampy anao hamelatra ny mihoatra noho ny fifaninanana manokana, ao anaty ary ivelan'ny fikambanana.
Manana kalitao mazava tsara ianao amin'ny fanamarinana mari-pamantarana hafa, raha vao CCNA Certified ianao, toy ny - CCNP (Cisco Certified Network Professional); CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert Expert) CCDA (Cisco Certified Design Certification) sy CCDP (Cisco Certified Design Professional).
Heverina ho tompon'andraikitra amin'ny tambazotra ianao, mahay, ary mahay mandanjalanja amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fahamaroan'ny tambajotran-tserasera na ny tambazotran'ny tambazotra.
Ny fankatoavana ambony, amin'ny maha-matihanina ny tambajotra master, ny CCNA Certification raha mifanohitra amin'izay rehetra fanamarinana hafa dia mahatonga azy ho tanjona ao ambadiky ny fangatahana. Mahazo tombony ianao na inona na inona mety hitranga aminao fa tsy manana traikefa isan-taona ianao ao amin'ny repertoire.
Tokony ho fantatrao ihany koa anefa ireo fahaiza-manao fototra tokony harahinao mba hahazoana ny fanamarinana CCNA na ny fiofanana CCNA.
Ireo miaraka aminy dia singa manan-danja roa tokony ho anao-
Fahatakarana ny tambajotra fototra, tarihin'ny tambajotran'ny WAN sy LANE, ny fametrahana azy, ny fametrahana sy ny fomba fiasan'izy ireo.
Ampifanarao na ampidiro ny tamba-jotra sy ny tambatsela sy ny boloky ny IP, IPX, Frame Relay, Ethernet, ary VLANs.
Mamindra ny fidirana an-davaka, mianatra ny fampiharana vaovao toy ny varotra Internet, media interactifs, sy ny sisa.
Tokony hahazo ny fampiofanana CCNA ianao avy amin'ny fototra iray izay manara-maso eo amin'ny sehatra ary manome fahafahana anao hahazo ny fitakiana ny fampahalalam-baovao amin'ny alàlan'ny fananganana tetikady azo atao mba hampisehoana anao amin'ny fampivoarana ny tambazotra amin'ny tambajotra, manara-maso ny tambajotra amin'ny toe-pahasalamana sy ny fitsapana, ary koa ny fomba iasana tambajotra. Tokony ho voaomana ianao mba hahafeno ny fepetra takian'ny fikambanana amin'ny fahafaha-manao manokana. Tokony ho azonao ny fampahalalana manokana momba ny fizarana manokana, ny fifampiraharahana ary ny fahaiza-manaon'ny fitantanana mba hampitaovana ny fahaiza-manaony rehefa misy traikefa eo amin'ny toe-javatra mitranga. Tokony hahazo fiakarana lavitra be amin'ny Cisco fitetezana sy ny famerenana ny mari-pahaizana amin'ny fanamarinana. Vitsy amin'ireo lohahevitra fototra tokony ho fantatrao -
Modely noforonina sy ny safidiny
OSI fakan-tsary ary ny toe-javatra mety
Fitaterana fitaterana fitateram-pitaterana
Fanaraha-maso ny rano sy data
Cisco switch items
LAN fandrindrana LAN, miova karatra ary miasa miaraka amin'ny Switch-2 Switches
Famaritana ny fiampangana an'i IOS
IP Routing Technologies sy ny Process
Cisco Internetwork ary ny fitantanana azy
Novell IPX sy ny endriny
Tolotra fitantanana, fiarovana ary fitantanana
Mba hamaritana mazava tsara, ny tanjona dia ny hahafantarana ny fiantohana LAN amin'ny alàlan'ny fanovozan-javatra samihafa, manara-maso ny VLANs, ny OSPF sy ny EIGRP, miasa amin'ny fahafaha-manaon'ny tamba-jotra, ny tombony avy amin'ny rahona ary ny famakafakana ny fahasarotana eo amin'ny tambazotra ho an'ny serasera.
Ny fampiofanana CCNA amin'ny fiorenana miaraka amin'ny lazany sy ny traikefa dia ny zavatra tokony hikolokolo sy hifidy. Ny fikambanana tahaka ny "KOENIG Solutions" izay manana ny tsara indrindra amin'ny fanofanana manokana sy ny birao fanamafisana ho an'ny fanantenana, sy ny fahatarana, ary ny manam-pahaizana, momba ny fandrosoana rehetra eo amin'ny sehatry ny tambazotra. Manana manam-pahaizana mihoatra ny 300 izy ireo hanamafy ireo mpitsabo izay manam-pahaizana amin'ny sehatra misy azy ireo. Ny "KOENIG Solutions" dia heverina ho mpisava lalana eran-tany amin'ny fampiofanana ny tambajotra. Mitady fomba fampiofanana miovaova avy ao amin'ny efitrano tsotra izy ireo mankany amin'ny traikefa an-tsehatra, mandefa mpanolo-tsaina ao amin'ny lalam-pivorianao. Izay olona mikatsaka fiantsoana mamirapiratra eo amin'ny tambajotra, avy amin'ny vahaolana ho an'ny manam-pahaizana iray dia afaka mahazo ny fanamarinana CCNA azy ireo.
Azo inoana fa manana zavatra iray mba hanamafisana bebe kokoa ny fahaizanao manoloana ity tontolo feno herisetra ity ary amin'ny indostrian'ny sehatry ny tambajotra dia tena manan-danja tokoa ny manana zavatra toy izany. Tsy fotsiny ny fanamarinana izay miasa, fa ny fanampiny, ny fampianarana, ny fahaiza-manaony, ny angona sy ny fahitana izay hahatonga anao ho avotra sy hahomby amin'ny toe-javatra rehetra eo amin'ny toe-java-manerantany. Rehefa vita ny fanamarinana CCNA, dia ekena ianao eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena, na inona na inona ny fitenim-paritra sy ny topographical. Toy izany koa ianareo dia mamadika ny loharanom-baovao sy eritreritra izay rehefa miparitaka amin'ny filaharana marina dia tsy hoe tombony fotsiny ny fikambanana amin'ny famoronana fikambanana mahasoa dia hampiasa olona izay mifandray aminao amin'ny alalan'ny fikambanana. Ny fandresena ny CCNA Certification dia, na izany aza, fa ny vokatra ara-biôlôgika ao anatiny dia tena mamy ary hanome anao fahafahana hanadino ny olana rehetra. Voalaza fa tsy misy fahitana tombontsoa amin'ny zava-bita na dia eo amin'ny sehatry ny tambajotra aza dia misy iray - izany no fanamarinana CCNA.
Dingana amin'ny Torolalana amin'ny dingana mba ho lasa CCNP Wireless Certified Professional